That's so good, right?: September 2011
ကားပေါ်တွင်ရှိနေစဉ်တစ်ချိန်လုံးဖွဲဖွဲသာရွာခဲ့သောမိုးသည်ကားပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်နှင့်သည်းထန်လာတော့သည်..။ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတစ်လေမှာမချိန်းပဲဒီကားမှတ်တိုင်းမှာ အဆန်းထွင်ပြီး လာချိန်းသောစန္ဒီကိုရုတ်တရက်ဒေါသထွက်သွားသည်။ သည်ကိစ္စ အတွက် လဲစကားများပြီးပြီ။
ဘာပါလိမ့်..။ကော်ဖီဆိုင်မှာအသိတွေနဲ့တွေ့မှာစိုးလို့တဲ့..။ ဘုရားရေ..။ ငါနဲ့တွဲပြီးလူမြင်ခံရတာ မင်းအတွက်သိက္ခာကျစရာလို့ထင်နေရင် ဘာလို့ငါကို ရည်းစားအဖြစ် လက်ခံခဲ့သေးလဲ..။မနေနိုင်လွန်း ၍ပြောမိတော့..ကိုက နားလည်မှုကိုမရှိဘူး..ဘာညာပြောကာ စိတ်ကောက် သွားတော့ သူပဲအလျှော့ပေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ချိန်းထားသောမှတ်တိုင်သို့ရောက်သွားတော့ သူ့တကိုယ်လုံးအတော်စိုရွှဲနေပြီ..။မှတ်တိုင် မှာအမိုးရှိသော်လည်းပြင်းထန်စွာ တိုက်ခတ် နေသောလေက မိုးစက်များကိုသယ်ဆောင်လာသဖြင့် ပို၍ချမ်းလာသည်..။ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်လောက်သောက် ရရင်ကောင်းမှာပဲ..။ သူစောင့်နေသောမှတ်တိုင်၏တစ်ဖက်စွန်းတွင်တော့ သူ့လိုပင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရပ်စောင့်နေဟန်တူသော လူတစ်ယောက်ရှိသည်။ ကားစောင့်နေတာတော့မဖြစ်နိုင်။
သည်မှတ်တိုင်သည်ညရှစ်နာရီကျော်လျင်ကားမရပ်တော့သောမှတ်တိုင်သာဖြစ်၏။သူကတီရှပ်လက်တိုဖြင့်မိုးတွေစိုနစ်ကာချမ်းနေချိန်တွင်ထိုသူသည်မိုးကာအင်္ကျီကိုတင်းတင်းစေ့ကာဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကိုရှိုက်ဖွာလျက်ရှိသည်..။လေပြင်းဝေ့လိုက်တိုင်းယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် အတန်ငယ်ရှည်လျားသောပုခုံးထောက်ဆံပင်ပျော့ပျော့လေးတွေက လွင့်ဝဲသွားသည်။သူကိုယ်တိုင်၏ဆံပင်ကအသားကြမ်းကာ မာကျောသောကြောင့် ဆံပင်ပျော့လေးတွေကိုဘာရယ်မဟုတ်ပဲသဘောကျမိတတ်သည်။
ဆံပင်လေးတွေကစန္ဒီဆံပင်လေးတွေလိုပဲ..။သူ့အတွေးကိုသဘောကျသွားကာ ရုတ်တရက် လေချွန်ပစ်လိုက်တော့ ထိုသူကလှည့်ကြည့် သည်။ နှစ်ယောက်တည်းရှိတာ ရန်စတယ်လို့ထင်သွားပြီလားမသိဘူး..။ဘာပြောရမှန်းမသိပဲနူတ်ကလွှတ်ကနဲထွက်သွားသည်။
ဟာ..သေတော့မှာပဲ..။ဆေးလိပ်သောက်ချင်နေတာမှန်သော်လည်းသူ့တွင်ဆေးလိပ်မပါတာသူသိသည်။ထိုသူကဘောင်းဘီအိပ်ကပ်တွေကိုလှည့်ပတ်စမ်းကာ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေ သောသူ့ကိုတစ်ချက်ပြုံးကာဆေးလိပ်ပါထုတ်ပေးသည်။ ဆေးလိပ်ကို မီးညှိ၍အားရ ပါးရရှိုက်ဖွာလိုက်သောအခါတစ်ချို့တစ်ဝက်သည်သူ့အဆုတ်ထဲသို့အဆိပ်များအဖြစ်ဝင်ရောက်ကာတစ်ချို့ကတော့လေထဲသို့လွင့်မျောသွားသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နွေးသွားတာအမှန်ပဲ..။
ကျေးဇူးပဲ ဟုပြောလိုက်တော့မျက်လုံးကိုအသာမှိတ်ကာပြုံးလျက်ခေါင်းယမ်းပြသည်။ မလိုပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့..။ ထိုစဉ်မှာပဲရင်းနှီးပြီး သားကိုယ်နံ့ကလေးသည်သူ့နားတွင်မွှေးပျံ့လာသည်။ စန္ဒီရောက်လာပြီ..။
စန္ဒီသည်သူ့ထုံးစံအတိုင်း ဘာကိုမှဂရုမထားပဲပြောချင်ရာပြောကာ ရှေ့မှကြိုထွက်သွားသည်။ဟိုလူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ထွက်ခွာသွား သောစန္ဒီနောက်ကျောကိုစိုက်ကြည့်နေသောကြောင့်သူ့ရင်ထဲတွင်ကျေနပ်သလိုဖြစ်သွားသည်။ဒီလိုဆိုတော့ သူ စန္ဒီပုခုံးကိုပိုင်ဆိုင်စွာ ဖက်ထားရမှာပိုပြီးအရသာရှိပါလိမ့်မည်..။
ထိုဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်သို့ စန္ဒီဒုတိယအကြိမ်ချိန်းသောအခါပထမအကြိမ်ကလို သူအတိုက်အခံမလုပ်တော့ပါ။အမြဲနောက်ကျတတ်သော စန္ဒီရောက်မလာခင်ကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်လျက်ကော်ဖီကို မျိုချရင်းမျက်စိနောက်ဖွယ်လူများနှင့် Animal planet ကိုသာဖွင့်သော ထပိတ် ပစ်လို့မရသည့်ရွံရှာဖွယ်တီဗွီအစီအစဉ်ကိုသည်းခံရမှာထက်စာရင် မှတ်တိုင်တွင်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်လျက် Mp3 ကိုနားထဲထည့်ထားရတာ ကပို၍သက်တောင့်သက်သာရှိပေလိမ့်မည်။
ဒုတိယနေ့သည်ပထမနေ့နှင့်ဆန့်ကျင်စွာခြောက်သွေ့ပူအိုက်လျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်သည်တစ်ခါတစ်ရံတော့အပြောင်းအလဲမြန်သောမိန်းမ တစ်ယောက်နှင့်တူသည်။ညနေကမိုးသည်းထန်စွာရွာခဲ့သော်လည်းအခုတော့လမ်းမများသည်သူမဟုတ်သလိုပင်ခြောက်ကပ်နေသည်။မိုးရွာခဲ့သောသင်္ကေတအဖြစ်တစ်နေရာထဲမှာစုပြုံတင်နေသောအမှိုက်များနှင့်ခြောက်သွေ့စပြုကာလေထဲလွင့်ပါချင်နေသည့် သဲစီးကြောင်း ကလေးများသာရှိတော့သည်။
မှတ်တိုင်၏အဆုံးတွင်တော့ပထမနေ့ကလူထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏။သည်လူဝီရိယကောင်းလှချည်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့တော့ ဆေးလိပ်ပါလာသည့်အတွက် မည်သူ့ကိုမျှအောက်ကျို့စရာမလိုပဲ..သီချင်းနားထောင်ရင်း စန္ဒီကိုစောင့်နိုင်လိမ့်မည်။ မှတ်တိုင်ဆီ သို့လမ်းလျှောက်သွားတော့တိတ်ဆိတ်စပြုနေသောအချိန်တွင် သူ့ဖိနပ်သံကအတန်ငယ်ကျယ်လောင်နေ၏။
အရပ်အမောင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကထွားကျိုင်းသော်လည်းသူ့ကိုလှည့်ကြည့်သောမျက်လုံးများသည် ကလေးတစ်ယောက်လိုကြည်စင်ကာ ပျော့ပျောင်းသောဆံနွယ်နုနုများဖြင့်အနားသတ်သောထိုမျက်နှာသည် သူ့ထက်သုံးလေးနှစ်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်လေးတစ်ယောက် သာဖြစ်နိုင်သည်။
သူ့ကိုမြင်တော့မှတ်မိသွားသလိုရယ်ပြတော့ဘာရယ်မဟုတ်ပဲတုံ့ပြန် လိုက်မိသည်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ငြိမ်သက်ငေးမော နေရမှာကိုနှစ်သက်သောသူ သည်အဝေးပြေးကားပေါ်မှာ ဖုန်းဘီလ်တန်းစီသည့်အခါမျိုးမှာကြုံရတတ်သောသိသိမသိသိ မိတ်ဖွဲ့စကား ပြောတတ်သူများကိုမုန်းတီးသူဖြစ်၏။သည်လူကတော့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရလောက်အောင်စကားမများလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့။နံရံတွင်မှီထိုင်နေရင်းငါးမိနစ်ခန့်ကြာတော့ ခံတွင်းချဉ်လာသည်။
ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့ သတိလက်လွတ်ဖိထိုင်မိသောကြောင့် ဆေးလိပ်ဘူးသည်ပြားကပ်နေ၏။ ဆေးစတစ်ချို့ ထွက်ကျကာလိမ်ကောက်နေသောဆေးလိပ်ကိုပြန်ဖြောင့်ရင်းနူတ်ခမ်းမှာတေ့လိုက်တော့မှသူ့မီးခြစ်လွန်ခဲ့သောတစ်ပါတ်လောက်က ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်ကိုသတိရသည်။ရှစ်ထ်..။ဒေါသတကြီးဆေးလိပ်ကိုဖြုတ်ယူလွှင့်ပစ်ရန်လက်လှမ်းမိစဉ်မှာပဲ..ဖျောက်ကနဲအသံနှင့်အတူသူ့မျက်နှာနားတွင်မီးတောက်တစ်ခုလင်းလက်လာသည်။
သူနှင့်အနီးကပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသောအခါမီးခြစ်မှမီးတောက်ကလေးများက ထိုသူ့မျက်ဝန်းတွေထဲ..ရောင်ပြန်ဟပ် ကာတောက်ပနေခဲ့ သည်။
တတိယမြောက်နေ့တွင်တော့သူသည်စန္ဒီဆီသို့သွားရမည့်အစား၁၉လမ်းရှိလူရှင်းသောဆိုင်တစ် ဆိုင်၏ထောင့်ကျသောစားပွဲတစ်လုံးတွင် အယ်လ်ကိုဟောဖြင့်ဝေဒနာတစ်ချို့ကိုမျိုချရန်ကြိုးစားလျက်ရှိ၏။မနေ့ကစန္ဒီနှင့်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။စန္ဒီနှင့်သူ့ကြားတွင်ရန်ဖြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ဘယ်ကော်ဖီဆိုင်တွင်ထိုင်မလဲဟူသောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ဘယ်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်မလဲဟူသောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အနည်းဆုံးတော့ကားလမ်းကူးသည့်အခါအတူတူစောင့်မကူး၍လူကြားထဲမှာလက်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစား၍သို့မဟုတ်လမ်းသွားလမ်းလာ ကောင်မလေးတွေကိုလိုက်ငေး၍ဆိုတာတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။စိတ်သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တိုင်းသာလမ်းခွဲရစတမ်းဆိုရင်သူတို့နှစ် ယောက်ပြတ်စဲပြီးတာကာလအတော်ကြာလောက်ပြီ..။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကကွာဟမှုအက်ကြောင်းမည်မျှကြီးမားခဲ့ သည်ဖြစ်စေ စန္ဒီမျက်နှာလေးကိုတစ်ရက်မတွေ့ရလျင်မနေနိုင်သည့်စိတ်က ယိုင်နဲ့နေသောစိတ်များကိုပြန်လည်တည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။
အသည်းကွဲသည့်အခါစိတ်ထဲတွင်မွန်းကျပ်စွာကူကယ်ရာမဲ့သည့်အခါအရက်ဖြင့် ထွက်ပေါက်ရှာခြင်းသည်လွန်စွာရိုးရှင်းဟောင်းမြင်းသော နည်းဖြစ်သော်လည်းသူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိပါ။မနေ့က စန္ဒီသည်သူ့နှင့်စတွေ့ကတည်းက ကျောင်းတုန်းကရည်းစားဟောင်းတစ်ယောက်
တော်ကြောင်းတတ်ကြောင်းချမ်းသာကြောင်းများကိုစီကာပတ်ကုံးပြောလျက်ရှိ၏။ဘယ်အချိန်များ သူ့ဟာသူရပ်လိုက်မလဲဟုစောင့်နေ သော်လည်းအတော်ကြာသည်အထိမပြီးနိုင်သောအခါသူတစ်ချက်ဆဲပစ်လိုက်သည်။ထိုအခါမျိုးတွင်သူသည် စန္ဒီအတွက်နားလည်မှုမရှိသူ သဘောထားသေးသိမ်သူဖြစ်၏။ကိုယ့်ချစ်သူကတစ်ခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ကောင်းကြောင်းကိုရှည်ဝေးကြာမြင့်စွာပြောပြနေခြင်းကို ပြုံးပြီးနားထောင်ရလောက်အောင်သဘောထားကြီးသောယောက်ျားမရှိသလောက်ရှားပါးသည်ကို စန္ဒီသိရန်လိုပါသည်..။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲကြရင်စိတ်ပေါက်ကွဲထွက်ကာနံရံကိုသုံးလေးချက်ဆင့်ထိုးပစ်လိုက်တော့ စန္ဒီငိုသည်။
အသံလာရာဆီသို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင့်မားသောအရိပ်တစ်ခုသည်သူ့စားပွဲကိုလက်ထောက် ကာခန္ဓာကိုယ်ကိုငုံ့ကိုင်းလျက်သူ့ကို မိုးကြည့်နေ၏။ ဟိုလူပါလား...။ သူ၏နားမလည်ဟန်အကြည့်ကိုမြင်လိုက် ရတော့တစ်ဖက်ဝိုင်းတွေထိုင်နေရာကသူ့ကိုမြင်၍ လာနူတ် ဆက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှည်လျားစွာရှင်းပြနေတော့မှသူ့ရိုင်းပြမှုအတွက်အားနာသွားသည်။
'ရပါတယ်..ဒါနဲ့ဟိုတစ်ယောက်နဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးလား' ထိုမေးခွန်းကိုကြားလိုက်တော့သူ့ရင်ထဲတွင်မွန်းကျပ်ကာ ခေတ္တတိတ်ဆိတ်သွား သည်။
ရပါတယ်..။ ခင်ဗျားအလွန်မဟုတ်ဘူး ..။စိတ်ထဲမှာသာပြောလိုက်ကာ သူ့ရှေ့ရှိခွက်အလွတ်ထဲသို့ ဖန်တကောင်းထဲမှလက်ကျန်ဘီယာများ လောင်းထည့်ပေးလိုက်သည်။သူ့ရှေ့ရှိခွက်ကျန်ကို ကောက်မော့ရင်းနောက်တစ်ဂျားထပ်မှာတော့ သူ့ကိုနားမလည်သလိုကြည့်လျက်ရှိ သည်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းဟန်ရှိသောသူ့မျက်နှာနှင့်လိုက်ဖက်သောနာမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဖွဲ့သူများကို မုန်းတီးလေ့ရှိသည့်ထုံးစံနှင့်မသိချင် ယောင်ဆောင်ရမည့်အစားလက်တစ်ဖက်ကိုကမ်းပေးကာလက်ဆွဲနူတ်ဆက်လိုက်မိသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရှေ့တွင်သောက်ဖော်သောက်ဖက်တစ်ယောက်ရှိနေသည့်အတွက်ခုနကထက်စာရင်တော့ ရင်ထဲမှာအတော်ပေါ့ပါးသွား သည်။
'ဒါနဲ့ ခင်ဗျားကောသွားမစောင့်ဘူးလား' သိပ်မရင်းနှီးသေးသူတစ်ယောက်နှင့်ရင်းနှီးမှုရရင် သူနှင့်သုခကြားရှိတစ်ခုတည်းသောဆက်နွယ်မှု ကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်ရသည်။
' ကျွန်တော်ကမှတ်တိုင်မှာဒီအတိုင်းလာထိုင်တာဗျ..' ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ သူဆက်မမေးဖြစ်ပါ။ ဆေးလိပ်ကိုသာဖိ၍ဖွာနေလိုက်သည်။ အတန်ကြာသောအခါ သုခဆီမှနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာသည်။
'စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ အစ်ကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်'
' ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ရည်းစားမထားတာဗျ ဟာသတစ်ခုရှိတယ် မိန်းမဆိုတာပြည်သူလိုပဲ..ဘာပဲလုပ်ပေးပေး ဘယ်တော့မှမကျေနပ်ဘူးတဲ့'
'ဒါဆို မင်းဟိုမှတ်တိုင်မှာဘာလို့မှန်မှန်လာထိုင်လဲ ပြောပြလို့ရမလား'
'အင်း..ဘာအကြောင်းမှတော့မရှိဘူး..အဲ့ဒီနေရာကလူရှင်းပြီး တိတ်ဆိတ်လို့ဆေးလိပ်လာသောက်တာ..မီးခိုးငွေ့လေးတွေ လေထဲလွင့် သွားတာ သိပ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေ'
သူ့ရှေ့တွင်ထိုင်နေသောလူငယ်လေးသည် သူ့လိုပင်ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့များကိုကြည့်၍စိတ်ကူးယဉ် တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်။ အဆုတ် ကင်ဆာ..အသက်ရူလမ်းကြောင်းရောဂါစသောနောက်ဆက်တွဲတွေကိုမေ့လျော့ထားနိုင်ရင်ပေါ့လေ..။အသစ်ရောက်လာသောဖန်တ ကောင်းထဲမှဘီယာများကို ခွက်နှစ်ခုထဲသို့မျှထည့်သည့်အချိန်တွင်ဘီယာနှင့်ဆေးလိပ်နှစ်ပင်လိမ်ကာရီဝေစပြုနေပြီ..။
ဒုတိယတစ်ခွက်ထဲသို့အထည့်တွင်ခွက်စောင်းကာယိုင်သွားလျင်သုခကသူ့လက်ကိုစိုးရိမ်တကြီး ဖမ်းထိန်းလိုက်တော့ လက်ဖ၀ါးချင်း ထိခတ်သွားသည်။
ထိုစကားကိုကြားတော့ သူနာကျင်စွာရယ်မောမိသည်။သူ၏ညာဘက်လက်ဆစ်များနှင့်လက်ဖမိုး များပွန်းပဲ့စုတ်ပြတ်ကာလက်ခုံတစ်ခုလုံး ယောင်ကိုင်းနေတာအမှန်ပဲဖြစ်၏။
'မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်အစ်ကိုသိပ်မူးနေပြီ'
'နိုး..ရတယ် ကျွန်တော်ပြန်လို့ဖြစ်ပါတယ်' အခုမှသိသောသူတစ်ယောက်ထံမှဒီထက်ပိုပြီးအခွင့်အရေးမယူသင့်ဟုထင်ပါသည်။
ပုံမှန်အချိန်မျိူးတွင်ပင်ပုခုံးချင်းဝင်တိုက်မိရုံဖြင့်စိတ်တိုတတ်သောသူ့အတွက်အခုလိုမူးနေချိန်တွင်ထိန်းကွပ်ဖို့လူတစ်ယောက်လိုအပ်တာအမှန်ပဲ။ ဆိုင်မှထလာသောအချိန်တွင်သုခသည်လက်တစ်ဖက်ကခါးကိုဖက်လျက်နောက်လက်တစ်ဖက်ကိုသူ့ပုခုံးပေါ်တွင်တင်ပေးထားကာ သူယိုင်လဲမသွားအောင်ဖေးမပေးနေသည်။မှတ်တိုင်သို့သွားရာလမ်းသည်လေတိုက်လျင်လွင့်သွားသောသစ်ရွက်ကြွေနှင့် သူတို့နှစ်ဦး၏ ခြေသံမှလွဲ၍တိတ်ဆိတ်နေ၏။သူ့အသိဥာဏ်များလဲလက်ရှိဖြစ်ရပ်ဆီသို့အာရုံရောက်တစ်ချက် မရောက်တစ်ချက်ဖြစ်လျက်ရှိသည်။
'အင်း..မထင်ပါဘူးဗျာ..ကျွန်တော် တကယ်ဖြေရင်လဲကြီးကျယ်တယ်လို့ မထင်နဲ့နော်'
'အချစ်ဆိုတာရယူခြင်းလဲမဟုတ်ဘူး ပေးဆပ်ခြင်းလဲမဟုတ်ဘူး.. တစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ယောက်ကအလိုက်တသိနဲ့ ဖြည့်စွမ်းနားလည်နိုင်စွမ်းပဲ'
စကားလုံးများစွာမပါသောသုခ၏အချစ်အပေါ်ခံယူချက်သဘောထားသည်သူနှင့် စန္ဒီအတွက်တော့ အလွန်မှန်ကန်သောဖွင့်ဆိုချက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စန္ဒီလိုအပ်ချက် စန္ဒီပြဿနာတွေကိုသူ ဘယ်လောက်နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့လဲ..။ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့လဲဟုမေးလာ လျင်သူခေါင်းယမ်းရလိမ့်မည်။ စန္ဒီကိုသိပ်ချစ်သော်လဲအခါများစွာတွင်သူ့အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့သည်ကများပါသည်။
ပိုင်ဆိုင်သမျှစာအုပ်များ၏ထောင့်စွန်းတိုင်းမှာတစ်ခြားသူတွေလိုနာမည်မထိုးပဲ ME ဟုရေးထိုး ထားတတ်သောသူသည် စန္ဒီပြောသလို အထူးတလည်အတ္တကြီးသူဖြစ်နိုင်၏။ ထိုမှနောက်ပိုင်းကာလများတွင် စန္ဒီမလာခင်စောင့်ဆိုင်းချိန်များတွင်သုခနှင့်စကား လက်ဆုံကျရ ခြင်းကိုသူပျော်ဝင်နှစ်သက်လာမိသည်။စိတ်သဘောထားအယူအဆမတိုက်ဆိုင်သော ချစ်သူနှင့်ရန်ဖြစ်နေရသည်ထက်စာလျင် ၀ါသနာ တူမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြင့်စကားစမြည်ပြောရသည်ကပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။သုခ သည်သူ့လိုပင် slow rock သီချင်းများ ဆာရီယယ်လစ်ဇင်ဝတ္ထုများနှင့်လက်ဖက်ရည်ချိုကျတို့ကိုနှစ်သက်သည်။ စန္ဒီကိုစောင့်ဆိုင်းရသော မိုးရာသီညနေများသည် သူ့အတွက် တစ်စုံတစ်ခုသောအဓိပ္ပါယ်ဖြင့်ပြည့်ဝစပြုလာသည်။
စန္ဒီကတော့အရင်လိုသူပြောသမျှစကားတိုင်းကိုပြဿနာရှာမခံရတော့သဖြင့် ထူးဆန်းအံ့သြလျက်ရှိသည်။ ဒီလိုနေတော့ကိုကသိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲဟုမှတ်ချက်ချသောအခါသူပြုံးနေလိုက်သည်။သူ စန္ဒီကိုချစ်ပါသည်။သူ့ကို စန္ဒီသိပ်ချစ်တာလဲသူသိသည်။မွေးကတည်းက မတူညီလာသောဝါသနာဗီဇတို့ကိုဇွတ်ညှိယူရန်မကြိုးစားပဲလိုက်လျောညီထွေထားလိုက်သောအခါ စန္ဒီသည်သူ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကာလအချို့ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက် တစ်ညနေတွင်သုခသည်သူမထင်မှတ်သောစကား တစ်ခုကိုပြောခဲ့သည်။
'ဘာပါလိမ့်' စပြောလာသောစကားသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ဝန်ခံလိုဟန်ရှိသော်လည်း သူတကယ်မေးလိုက် တော့ပြောသင့်မပြော သင့်ချိန်ဆနေပုံဖြင့် တိတ်ဆိတ်သွားသည်။
'အစ်ကိုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့နေ့က ကျွန်တော်ဒီမှတ်တိုင်ကိုရောက်နေတာ မိုးရွာလို့ခဏ၀င်ခိုတာ..ဒုတိယနေ့ပြီးတော့ နောက်နေ့တွေက ဆေးလိပ်လာသောက်တာ မဟုတ်ဘူး..'
ဘုရားဘုရား သုခမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲ..။သူ့စိတ်ထဲတွင်ဘာကိုမှန်းမသိစိုးရိမ်လာသည်။ သုခမျက်လုံးများသည်နီရဲကာ သူ့ကိုကြည့် နေသောအကြည့်မှာလဲစူးစိုက်လွန်းလှ၏။
'မင်းမူးနေတာလား..သုခ..ငါအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ရမလား' သူပြောသောစကားကို ဂရုမစိုက်ပဲနောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောလာသည်။
'နောက်နေ့တွေက အစ်ကို့ကိုတွေ့ချင်လို့လာတာ.. အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလား'
သုခ၏စကားအသွားအလာနှင့်အကြည့်များမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြောလာတော့မည့်စကားကိုသူရိပ်မိ သွားတော့သည်။ မပြောနဲ့သုခ..ဆက် မပြောနဲ့..။မင်းပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ရင်ထဲတွင်အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်နေသော်လည်းတကယ်တမ်းတွင်တော့ သူသည်နူတ်ဆိတ်ဆွံ့အ ကာသုခကိုငေးကြည့် နေမိသည်။
ကြီးမားသောအားတစ်ခုကသူ့ကိုဟိုးအမြင့်ကြီးသို့ပစ်တင်ပြီးရုတ်တရက်ပြန်လွှတ်ချလိုက်သလိုရင်တွေလွတ်ဟာသွားသည်။မဖြစ်သင့် ဘူး..။ မင်းဘာစကားပြောတာလဲလို့မေးလိုက်..ဒါမှမဟုတ် ဆွဲထိုးပစ်လိုက်..သူ့ဦးနှောက်ကဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည်ကို သတိပေးသော် လည်းသူခြေထောက်များ ကတော့နေရာမှ တစ်လှမ်းမှရွေ့လို့မရ။သူ၏ပျက်ယွင်းသောအခြေအနေကိုကြည့်ကာသုခ ရှေ့တိုးလာကာ သူ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကိုင်လှုပ်ယမ်းလျက်
'အစ်ကို..တစ်ခုခုပြောစမ်းပါ..ကျွန်တော့်ကိုဆွဲထိုးပစ်လိုက် ဒါမှမဟုတ်ရင့်ရင့်သီးသီးတစ်ခုလောက်ပြောစမ်းပါ.. ကျွန်တော် ဒီစကားတွေ မပြောဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်.. ဒါပေမယ့်ရင်ထဲမှာမွန်းကျပ်တာမခံနိုင်တော့ဘူး.. ပြီးတော့..'
ထိုစဉ်မှာပင်သူကိုယ်တိုင်မထင်မှတ်သောအပြုအမူတစ်ခုကို သူကျူးလွန်လိုက်မိသည်။ တွန်းကန်ရုန်းဖယ်ပစ်ရမည့်အစားသုခကို တင်းကြပ်စွာပွေ့ဖက်လိုက်မိခြင်းပင်ဖြစ်၏။နွေးထွေးသော ခန္ခာကိုယ်လေးသည်သူ့ရင်ခွင်ထဲတွင်ရှိုက်နေသလိုတုန်ယင်လျက် 'ကျွန်တော့် ကို ခွင့်လွှတ်ပါ' ဟုတတွတ်တွတ်ရေရွတ်နေသည်။ဘာကိုမှမမြင်ချင်မကြားချင်တော့သလိုမျက်လုံးကိုမှတ်ထားလိုက် သော အခါသူ မရေရာခဲ့သောခံစားချက်တို့သည်ကြည်လင်ပြတ်သားလာသည်။
သုခနှင့်မတွေ့ဖြစ်သောညနေများမှာ ခံစားရသောအလိုမကျစိတ်..အားငယ်ဝမ်းနည်း ချိန်များတွင် သုခကိုလိုအပ်စိတ်..စကားလက်ဆုံကျ ချိန်များတွင် ခိုးကြည့်မိသောနူတ်ခမ်းပါးလေး များကိုတွယ်ငြိစိတ်တို့ကိုပြန်လည်သတိထားမိလိုက်သည်။ သူ့ဘက်ကရောသုခ အပေါ် ရိုးသားခဲ့ပါရဲ့လား။
သူ့နူတ်ခမ်းပေါ်သို့နွေးထွေးသောအနမ်းတစ်ခုဖိကပ်လာ၏။မကြာသေးခင်ကမှ သူခိုးကြည့် မိခဲ့သေးသောနူတ်ခမ်းလေးများဖြစ်သည်..။ အခုချိန်တွင် သူ့မှာညှိမရသောပြဿနာတွေမရှိ..စိတ်မွန်းကျပ်မှုမရှိ..ပြီးတော့
ရုတ်တရက် စန္ဒီကိုသတိရမိသောအခါသုခကိုအလန့်တကြားတွန်းဖယ်လိုက်မိသည်။မဖြစ်ဘူး..။ ငါ့မှာ စန္ဒီရှိတယ်။ သုခသည်ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားသောအခြေအနေကိုနားမလည်သလို ကြောင်ကြည့်နေ၏။ 'ဆောရီး..သုခ..ငါသွားတော့မယ်'
သုခသူ့ကိုမတားပါ..။မှတ်တိုင်ကိုကျောခိုင်းလှည့်ထွက်လိုက်တော့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လာသော လေများသည်သစ်ရွက်ကြွေများ ကို လျောတိုက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်..။ မကြာခင်မိုးရွာတော့မည်။
လက်ဆစ်များဆီမှနာကျင်မှုသည်ဦးနှောက်သို့စီးဆင်းကာကျဉ်တက်သွားသော်လည်း ရင်ထဲမှ မွန်းကျပ်မှုဝေဒနာကတော့အနည်းငယ်မျှ ပင်လျော့ပါးခြင်းမရှိပါ။
စန္ဒီနှင့်ရန်ဖြစ်တုန်းကလိုပူလောင်ဆူဝေသောဒေါသဖြင့်ထိုးနေခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်အသည်း ခိုက်အောင်နာကျင်လျက်ရှိသည်။ သူမေ့ပစ်ချင်တော့နူတ်ခမ်းများ၏ချိုမြမှုကတော့လွင့်စင် ပျောက်ပြယ်သွားရမည့်အစားတမ်းတယစ်မူးစိတ်များသာ နက်ရှိုင်း တိုးဝင်လာနေသည်။
သူ့မျက်လုံးများပြာဝေလာသည်။ စန္ဒီ..ကိုယ့်ကိုကယ်ပါဦး စန္ဒီရယ်..။ကိုယ် စန္ဒီကိုချစ်တယ်။
မှတ်တိုင်အမိုးအောက်ကိုရောက်သွားသော်လည်းပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်နေသောလေက မိုးစက်များကိုသယ်ဆောင်လာ သဖြင့် ပို၍ချမ်းလာသည်..။မှတ်တိုင်၏တစ်ဖက်စွန်းတွင်..မိုးကာအင်္ကျီကိုတင်းတင်းစေ့ကာဆေးလိပ်ကိုရှိုက်နေသောလူတစ်ယောက်ရှိနေသည်။သူ့ခြေသံကြောင့်ထိုသူကလှည့် ကြည့်သောအခါတွင်ရေစိုထားသောပျော့ပျောင်းသည့်ဆံပင်ရှည်များဝဲလွင့်သွား၏။
သူပေးလိုက်သည်ကစာအိတ်အ၀ါလေးဖြင့်ထည့်ထားသောကဒ်ထူပြားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ထိုကဒ်ပြားလေးပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထားသောရွှေရောင်စာလုံးများတွင် သူတို့ ဇာတ်လမ်းအတွက်ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သောဇာတ်သိမ်းတစ်ခုပါဝင်၏။
စာအိတ်ကိုဖွင့်ဖတ်အပြီးပြောစရာစကားမရှိတော့သလိုသုခသူ့ကိုငေးစိုက်ကြည့်နေစဉ်မှာ ပဲ ရနေကျရနံ့ကလေးတစ်ခု သူ့နဘေးတွင်ဝေ့၀ဲ လာသည်။စန္ဒီရောက်လာပြီ..။
နူတ်ဆက်ရင်းတစ်ဖက်သို့လှည့်ထွက်လိုက်တော့ သူ့ပါးပြင်တွင်ပူနွေးသောအထိအတွေ့နှင့်အတူ မျက်ရည်တစ်ချို့စီးဆင်းလာ၏။ နောက်သို့လှည့်မကြည့်ဖြစ်သလိုသုတ်ဖယ်ရန်လဲမကြိုးစားမိပါ။
စာကြွင်း။ ။ ကျွန်တော် ခင်မင်ရသော ညီလေး ဝေဟန်ပိုင်ရဲ့ စာမူတွေကိုပြန်ဖတ်မိတဲ့အခါ ကာလအတော်ကြာတုန်းက သူ့ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့တာကို သတိရမိပါတယ်။ သူရေး သလို ငါလည်းရေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ စာတွေရေး ခံစားမိရင်းပေါ့။ အချစ်ဆိုတဲ့ ရသတစ်ခုကို ဖန်ဆင်းပြီး စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင်ရေးဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့် အတွက်မလွယ် ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အချစ်ဝတ္ထုလို့ဆိုနိုင်မယ့် ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်စာမူတွေဟာ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အချစ်ဆိုတာကို သိပ်မခံစားရဲတော့တာကြောင့် အချစ်ဝတ္ထုသစ်များမရေးဖြစ်ရတော့ခြင်းပါ။ ကျွန်တော့် ဘလောခ့်မှာပြန်လည်တင်မယ်စိတ်ကူးရင် စာမူပိုင်ရှင် စာရေးသူကို ခွင့်တောင်းပြီးမှတင်တတ်ပါတယ်။ အခုတင် ထားတဲ့စာမူ သို့မဟုတ် ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် စာမူတွေကို တစ်ဆင့်ပြန်ဝေမျှချင်သူများ ညီလေးဝေဟံ ဆီခွင့်တောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘလော့ခ် ဘယ်ဆိုက်က ပြန်လည် ကူးယူခြင်းဆိုတာကို ဖော်ပြပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်မှတစ်ဆင့် တဆင့်ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြနေ ခြင်းများကို မြင်တွေ့နေရခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:29 AM No comments:
ပြာလွင်နေသောကောင်းကင်ပြာပြာ ကြည်လင်နေသောရေ ပြာပြာရှိရာတောင်ကျစမ်းချောင်းထဲမှာ ကျွန်တော် လွတ်လွတ် လပ်လပ်ကူး ခပ်နေချိန် ဘ၀ဟာစမ်းရေကြည်လိုချိုမြိန်ပါရဲ့။ ချောင်းရိုးတစ်လျှောက်အားရပါးရကူးခပ်အပြီး သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ကိုပုံတူကူးဆွဲနေသူ အဖြူရောင်ကျောက်ဆောင်တွေပေါ် ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရှိရာကို လှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ သီဟဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း လေး နဲ့ ကျွန်တော် လိမ္မော် ခင်းကအပြန် အိမ်မပြန်သေးဘဲ အေးအေးသက်သာ ကြည်နူး ချိန်ယူနေကြတာနေ့စဉ်ပေါ့ ဒီချောင်းရိုးလေးမှာ။ ခဲပန်းချီကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ခြစ်နေတဲ့ သူ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်တဲ့အချိန် စာရွက်တွေကိုသိမ်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်သူ မှီလိုက်ချိန် မှာ ခံစားရတာက ရင်ထဲအဆုံးမရှိချမ်းမြေ့ခြင်းတွေ။ သူ့မျက်ဝန်း မှာ နှစ်လိုအားကိုးခြင်းတွေ နွေးထွေးတဲ့အချစ်အင်အားတွေ ကို မြင်နေရ သလိုပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာ ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံး သံယောဇဉ်အရှိဆုံး ဘယ်သူမှအစားထိုးလို့မရမဲ့သူ...သူပါပဲ။
"ဟား....ဟား ခါးကိုအဲဒီလောက်မဖက်နဲ့ကွာ ငါယားတတ်တာသိရဲ့နဲ့"
အိမ်အပြန်လမ်းတလျှောက် ခပ်ဖြည်းဖြည်းနင်းလာတဲ့ ကျွန်တော့်စက်ဘီးနောက်မှာသီဟကိုတင်နင်း၊ သူက နောက်ထိုင်ခုံမှာ ခွထိုင်ပြီး ခါးကိုတင်းတင်းဖတ် နောက် ကျောကိုခေါင်းမှီထားတာကိုး။
အင်း....နွေဦးလေပြေနဲ့အတူ လေလွင့်ရွက်ဝါကြွေတွေ ဝေ့၀ဲ နေတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ နှစ်ဦးသားကြည်နူးနေရချိန်ဟာ သိပ်မကျန် တော့ပါလား။ ကောလိပ်တက်ဖို့ငွေကြေးပြည့်စုံအောင် မြို့တက် ပြီးငွေရှာရမယ်.. ..ကျွန်တော့် ရှေ့ရေးအတွက်။
ကျောပြင်ပေါ်မှာ စိုစွတ်မှုကိုခံစားရတော့ စက်ဘီးနင်းတာကိုရပ် နောက်ပြန်လှည့်အကြည့်မှာ သူ့မျက်ဝန်းတွေက မိုးတွေရွာ နေ ပါလား.... " မငိုပါနဲ့လားကွာ. ..ငါလည်းမင်းနဲ့ဒီလိုအမြဲနေချင် တာပါပဲ။"သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းလေး စကားနား ထောင်တယ် မျက်ရည် တွေကိုသုတ်ပြီး အပြုံးတွေနဲ့ပြန်လည် စိုပြေစေ တော့တာ ချက်ချင်းလိုပဲ။ သူ့အိမ်ကိုရောက် တော့ စကားမဆိုဖြစ်ကြဘူး တိတ်တဆိတ် ၀င်သွား တယ်အိမ်ခန်းထဲကိုလေ။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမပြောဖြစ်ပေမဲ့ မျက်ဝန်းမှာ ပုလဲတွေခိုသီလာတာ မျက်တောင်များကို ခပ်သွက် သွက်အလုပ်ပေးရင်း စက်ဘီးကိုဖိနင်းရင်း....ဟား..။
အမေရယ် အဖေရယ် ညီလေးရယ် ညစာကိုတိတ်တိတ်ဆိတ် ဆိတ်စားသောက်ဖြစ်ရင်း နက်ဖြန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာ တွေကိုသာ အာရုံစိုက်သယောင် လုပ်ဆောင်နေမိကြတယ်။
အဖေကသားတစ်ယောက်တိုးတက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေများ နေပုံပဲ။ဒီမှာဆို ရွာကစိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသာ လုပ်ကိုင် နေထိုင် သွားရမှာ။ မြို့ကြီး...မြို့ကြီးဆိုတာ တောနေလူတွေ အတွက် အိပ်မက်မဟုတ်လားလေ။ အမေကတော့သားနဲ့ခွဲရမှာ မို့ မျက်ရည်စမ်းစမ်းနဲ့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေကို ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပေးနေလေရဲ့။ ကျွန်တော့် ညီလေးကတော့ အစ်ကို့ကို အားကျတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့် တယ်ပေါ့ အဲဒီညချမ်း လေးမှာ။ ကျွန်တော်ကရော မိဘတွေ မောင်ဖွားတွေနဲ့ခွဲရမှာကို ၀မ်းနည်းနေသလား သီဟနဲ့ခွဲရမှာမို့ လစ်ဟာနေသလား နက်ဖြန်နေ့ရက်တွေအတွက် ရင်ခုန်နေသလား ရောထွေးနေတဲ့ စိတ်နဲ့ ရင်ထဲမှာဟာတာတာ။
အင်း....အ၀တ်အစားတွေထည့်ပြီးပြီ ငွေအနည်းငယ်လည်း ထည့်ပြီးပြီ အမေ့ရဲ့မှာတမ်းကိုလည်းစာအုပ်လေးထဲချရေးပြီးပြီ။ ဒီငွေရောင်သော့တွဲ....သော့တွဲငယ်လေး..အထက်တန်း ကျောင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်လေးတစ်ရက်မှာ ပေးခဲ့တဲ့သူ့ လက်ဆောင်လေးရယ်ပါ။
နှောင်တည်းထားတဲ့ ကြိုးတွေကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်အမှတ်တရဓာတ်ပုံတချို့ကို အတန်ကြာ စိုက်ကြည့် မိရင်းအားလုံး အားလုံးကို အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ နေရာဒေသသစ်ကို လှမ်းရတော့မယ့်ခံစားချက်က ရင်ထဲပြင်း ပြင်းပြပြ။
မသွားချင်ဘူး....မသွား တော့ဘူး...ဟင့်အင်....သွားမှဖြစ်မယ်. ..သွားတာကောင်းပါတယ်လေ...။
"သားကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နော်၊ငါ့သားကလိမ္မာပြီးသားပါ အထူးမှာစရာမလိုဘူး၊စာရေးနော်။" အဖေကမှာတယ်။
"ငါ့သားထမင်းကိုဝအောင်စားနော်၊ မြို့မှာအဆင်မပြေရင် အမေ့ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့။"တဲ့ အမေရယ်မျက်ရည်ဝဲရင်းဆိုပြန်တယ်။
"ကိုကြီး ကျွန်တော့်အတွက် ဖတ်စာအုပ်လေးတွေဝယ်ထည့်ပေး လိုက်နော်။"လို့ ညီလေးကမှာတမ်းချွေတယ်လေ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလေးကရော စကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုတော့ဘူး ကျွန်တော်သွားလာလှုပ်ရှားနေတာကို မျက်တောင် မခတ် တမ်း လိုက်ကြည့် စိုက်ကြည့်တယ်၊ အထုပ်အပိုးတွေကိုကိုင် တွယ်ပြီးလိုက်ပို့ဖို့ပြင်တယ်။ မိဘတွေရှေ့မှာ ဒီထက် ပိုလို့မရ တော့တာမို့ မျက်ဝန်းတွေကသာ စကားဆိုရင်းပေါ့ နှုတ်ဆက်... .နှုတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစား..။
ဒီအ၀ါရောင်လမ်းလေး..လမ်းသွယ်လေးထဲ ဘယ်အချိန်ပြန် လာနိုင်မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး။
သွားစမ်း ဒီသစ်ရွက်ကြွေ တွေ....ငါ့ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ် မကျကြစမ်း နဲ့။ဒီမျက်ရည်တွေကရော ဘာကိစ္စကျနေရတာလည်း...ငါ...ငါ သေရွာကိုသွား နေတာမှမဟုတ်တာ။
လေနုအေးတွေ တိုက်ခတ်မယ့် အာရုဏ်သစ် မြို့ကြီးဆီကိုသွား ရမှာပဲ။ လက်တွေဝှေ့ယမ်းနေတာ သူတို့မျက်ဝန်းတွေမှာ ခွဲခွာရ ခြင်းကိုခံစားနေကြရတာတွေက ကျွန်တော် အ၀ါရောင်လမ်း လေးကနေ......အနီရောင်လမ်းမပေါ် ခြေလှမ်းတွေတင်ဖို့ တွန့် ဆုတ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။
နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်....နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါပြီ ထင်းရှုးနံ့သင်းတဲ့ လမ်းကလေးရယ်။
ခပ်မြင့်မြင့်ရှိနေတဲ့ တောင်ကုန်းကတစ်ဆင့်အဆင်းမှာတော့ မြို့ကြီးကိုသယ်ဆောင်သွားမယ့် ဘူတာကြီးရှိပါတယ်။ လူတွေ များအုပ်စုလိုက်သွားနေကြတာ များမှများ။ ဒီတော့ကျွန်တော် လည်း ခပ်သွက် သွက်သွားမယ် ခြေလှမ်းတွေကို သွက်လိုက် စမ်း.....နှောင့်နှေးမနေနဲ့တော့ကွာပေါ့။
"တူ..တူ" ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ရထားကြီး ဘူတာကိုဆိုက် ရောက်လာတော့ ကျွန်တော် လက်မှတ်ကိုအသင့်ပြင်ရင်း ရထားပေါ်ကို တစ်လှမ်းခြင်း..တစ်လှမ်းခြင်း..။
ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေက ရထားအပေါ်မရောက်ချင်တော့ဘူးထင်ရဲ့ လေးကန်လိုက်တာ။
ကျော်ကျော်...မြို့ရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ဦး။ ရွာကထွက် ခွာသွားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘော်ဒါအသိတစ်ယောက်ပေါ့။ သူ့ ဆက်သွယ် ပေးမှုကြောင့် နို့ဘူးတွေကို ပက်ကင်ထည့်ပေးတဲ့ စက်ရုံမှာအလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ ရောက်ခါစမှာတော့ သိပ်အဆင် မပြေသေးပေမဲ့ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်... အလုပ်ဟူသမျှ ကျွန်တော့်အတွက်ဂုဏ်ရှိစွမဟုတ်လား။
တရွေ့ရွေ့လည်ပတ်နေတဲ့ ပတ်လမ်းပေါ်မှာ တရွေ့ရွေ့လည် ပတ်နေတဲ့နို့ဘူးလေးတွေက အစီအရီ။
ညနေ၅နာရီဝန်းကျင်မှာ လည်ပတ်နေတဲ့စက်ရုံကြီးတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်လို့။ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရင်း ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ဘာလည်းတော့မသိဘူး။ ပျော်ရွှင်တာလား.....အားရ တာလား အလိုလိုမြောက်နေသလိုပဲ... .အလုပ်လုပ်ရလို့လား... ဒါမှမဟုတ်။
"ဟုတ်" ခင်ဖို့တော့အကောင်းသား အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အကူအညီပေးတတ်တယ်။ အသစ်တွေကိုနားလည်မှုပေး တတ်သားပဲ။
လမ်းမတစ်လျှောက် လျှောက်လာရင်း အင်တာနက်ကဖေးကို ခဏ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေရှာဖွေဖို့ပေါ့ဗျာ။ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် အလုပ်ရှာဖွေရတာက ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပိုပြေတာကြောင့်လေ။
"တီ...တီ" ရုတ်တရက် လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ဟမ်းဖုန်းကအသံ မြည်လာတယ်...သူငယ်ချင်းလေး သီဟဆီကပေါ့။ လွမ်း ကြောင်း..... မြို့ပေါ်မှာ လူရှုပ်တွေ များသတဲ့၊ သူကိုသတိရ ပါဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလေ။
သူပြောသလို မြို့က မာယာများမယ် မထင် ပါဘူး... ပျော်စရာ ပါ။
အိမ်နား....သူငယ်ချင်းကျော်ကျော်ရဲ့ အိမ်ခန်းနားရောက်တော့ စတိုးဆိုင်ထဲဝင် ခေါက်ဆွဲထုပ်တွေ၊ မုန့်တွေ.....နို့ဘူး.. ..အင်း. .. ကိုယ့်စက်ရုံ ကထုတ်တဲ့နို့ဘူးကိုယ်ပြန်ဝယ်သောက်ရ ပြန် တယ်။ပြီးတော့လည်း ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို ဂရုတစိုက်.. ..ပြန် ထည့်ရ တယ်...မြို့မှာငွေကအရေးကြီး သမို့။
အိမ်အပြန်လှေကားတွေပေါ်ခက်သွက်သွက်တက်ရင်း မြင်ရတာ ကတော့ တိုက်ခန်းတွေက ပဆစ်အိမ်လို ကျဉ်းမြောင်း နေသ လို... အသက် ရှူကျပ်သလို ထင်ရတဲ့ ခံစားရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ မြင်ရပြန်တယ်။ ဒါဟာမြို့ပြဆိုတဲ့....မြို့ပြပါပဲ။ ဒါဟာအရေးကြီး သလား အခုအချိန် မှာ မစဉ်းစားနိုင်သေးပါ။ ကောလိပ်တက်ဖို့ ပိုက်ဆံစုမိဖို့သာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့။
ညနေခင်းအခန်းထဲမှာကျော်ကျော် တစ်ယောက် အပြတ်ရှိုင်းနေ လေရဲ့။ သူ့မျက်နှာမှာ အပြစ်အနာအဆာရှာနေသည့်အလား မှန်ကိုစိုက်ကြည်နေတော့တာ။ သန့်ပြန့်နေသည့်သူ့အသွင်က နေ့လည်ကပုံစံနှင့်လုံးဝမတူတော့။
"ငါလား....ငါညပိုင်းအလုပ်လုပ်မယ့် ဘားကိုသွားမလို့လေ၊ အဲဒီမှာလုပ်ရတာကောင်းတယ်ကွ၊ မင်းလည်း ကောလိပ်အ တွက်ငွေစုနေတာ မလား...ငါနဲ့လိုက်ခဲ့မလား။"
'ငါ့ကောင်ရ အဲဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပါပြီကွာ မင်း ကသန့်ပြန့်ပြီးသားပဲဟာ"
"ဒီလောက်သန့်မှ အလုပ်ကအိုကေမှာကွ....စကားမစပ် မင်းကို ပြောပြရဦးမယ်၊ နိုက်ကလပ်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက မမ တစ်ချို့နဲ့ လိုက်လိုက်သွားတော့ ငါ့လက်ကိုကိုင်ကြည့်ပြီး ကြမ်း တယ်နော်တဲ့။ ကျွန်တော်က ဂေါ့ဖ်ကစားလို့ပါလို့လိမ်ပြော ရတာ ပေါ့ကွာ၊ ငါ့ကိုယ်ငါသိပါတယ် ငါကလူချောပဲ ဟုတ်တယ်မလား .. ဟား...ဟား"။
ဒီကောင်တော်တော်တော့ မလွယ်ဘူး။ငွေတော့အဆင်ပြေပုံပါ ပဲ....ညပိုင်းကလပ်မှာအလုပ်သွားလုပ်တာ အဲဒီလောက် သန့် ပြန့်ဖို့ လိုသလားတွေးမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ နေ့ပိုင်းအ လုပ်အပြင် ညပိုင်းအလုပ်ပါအဆင်ပြေရင်တော့ ကောလိပ် တက်တဲ့ အခါစိုပြေမယ်ထင်ပါရဲ့။
ရေပန်းကတစ်ဆင့်ကျလာတဲ့ရေမှုန်ရေမွှားတွေ....ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခတ်တာအဆက်မပြတ်။စိတ်ထဲမှာတော့ ရေချိုးနေတာ ကို မေ့မေ့ လျော့လျော့ကိုဖြစ်လို့။ အတန်ကြာရေချိုးပြီးမှ ရေချိုးခန်း ထဲကထွက်လာမိတယ်။ "တီ....တီ"ကုတင်ဘောင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ဟမ်းဖုန်းလေးက အသံမြည်လာတော့ ဘယ်သူ့ဆီကများလည်း...။
အချိန်မဆိုင်းအ၀တ်တွေခပ်သွက်သွက်လဲရင်း သီးသန့်လူကုံထံ သူဌေးရပ်ကွက်တစ်ခုက အရက်ဘားကိုအမြန်သွားရတာပေါ့။ ကိုယ်ရတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လေးကို တာဝန်ကျေပွန်မှကောင်း တာလေ။
တံခါးကိုအသာတွန်းဖွင့်လိုက်စဉ်မှာတော့ မီးရောင်မှိန်မှိန်ထွန်း ထားတဲ့ ဘားအတွင်းမှာ မွှေးရနံ့တစ်ချို့သင်းပျံ့နေပါရဲ့။ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ စားပွဲဝိုင်းတွေမှာအေးအေးသက်သာ အပန်းဖြေနေကြ တဲ့ လူတွေကအများသား။ ဟော.....ပြောထားတဲ့ခုံနံပါတ်မှာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချ သောက်နေတဲ့ ခပ်သန့်သန့်လူရွယ်တစ်ဦး။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ ဘာကိုများ စိတ်ဆင်းရဲနေပါလိမ့် သူများတွေ လိုမဟုတ် တစ်ယောက်တည်း။
]] private taxi အတွက် ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ့ /}}
သူ့ဆီကစကားသံသိပ်မကြားရဘူး။ စကားမဆိုနိုင်လောက် အောင်များကြီးကျယ်နေသူလားမသိ။ နောက်တော့မှ ပက်ကင် နံပါတ် ၃၃၆မှာ ထိုးထားတဲ့ကားကိုသွားမောင်းယူလာပြီး စောင့် ဖို့ပြောကာ ကားသော့ကို ပေးတော့တယ်။ ...ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်တဲ့ သူ့မျက်ဝန်း တွေကတစ်မျိုးပဲ။
ညှင်းသွဲ့သွဲ့တိုးဝင်လာတဲ့နွေဦးလေပြေတွေနှင့်အတူ ရွက်ကြွေ တွေကို သူငေးကြည့်နေသလား ဘာတွေကိုတွေးနေပါသလဲ။ ချစ်သူသက်ထား ကိုသတိရနေတာလား။ ငါနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး လေ.။ နောက်ကြည့်မှန်ကတစ်ဆင့်အကဲခတ် ကြည့်တော့ သူ ကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့် နေသလိုပဲ။
"ဆောရီး...ဒီအခွေလေးထည့် လိုက်မယ်နော်.." လို့ပြောရင်း သီချင်းစီဒီလေးကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ဖွင့်စက်ထဲကို။
ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းထွက်လာတဲ့ ဂီတသံနဲ့အတူသူကျေနပ် နှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုရသွားတယ်ထင်ပါ့. ..အပြုံးတစ်ခုတွဲလွဲခိုလာ တယ် သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ။ ကားကိုဂရုတစိုက်မောင်းနှင်ရင်း မြို့စွန်ကနေမောင်းထွက်လာကြတယ် သူ့အိမ်ခန်းရှိရာ မြို့တွင်းကိုပေါ့။ ကားက လည်းကောင်းလိုက်တာ ငြိမ့်နေတာ ပဲ.....ကိုယ်ပိုင်ဘယ်တော့များမှရမလည်း....ဒီလိုကားလေးကို မောင်း ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခန်းနဲ့ ခန့်ခန့်ထည်ထည် ကောလိပ် တက်ရရင် သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲစတားပဲ။ အတွေးလေးရယ်မှ တလည်လည်ပေါ့လေ။
အိမ်ခန်းကို ရောက်ပြီးခဏ အပြင်မှာခဏစောင့်ရသေးတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ "ကျွီ...."ဆိုတဲ့တံခါးပိတ်သံ နဲ့အတူ သူ့အိပ်ခန်းထဲကထွက်လာတယ် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကိုင် ရင်း။ ပိုက်ဆံကလုံလုံ လောက်လောက် မထည့်လာမိလို့တဲ့။ ဒီလူကြည့်ရတာ ပိုက်ဆံ နေထိုင်မှု အလုပ်အကိုင်ပြည့်စုံနေရဲ့ သားနဲ့ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလည်း ခံစားချက်မျက်ဝန်း တွေနဲ့။ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း ဘယ်မှာနေတာတွေမေးနေသေး တယ် အဲဒါသူနဲ့ဆိုင်လို့လား သူများအကြောင်းကိုစပ်စုတာ စိတ်အတိုဆုံးပဲ။ "ဟေ့...မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လည်း...အချိန်ရရင်အတူ သောက်ရအောင်လား။"
ကျွန်တော်မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ အခန်းလှေကားနားအရောက် သူ့အခန်းဖက်ကို ကြည့်လိုက် တော့ ၀ရန်တာကနေကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေဆဲ၊ သူ့ကိုကြည့်မှန်း သိတော့ လက်လှမ်းပြတယ်.. .သွားကွာ....ဘာ မှန်းမသိ။
မနက်ခင်းလေပြည်တွေနဲ့အတူ မအေးစက်နိုင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ဘောလုံးကစားဖြစ်ကြတယ် အလုပ်နားချိန်မှာလေ။ ကျော်ကျော်ရယ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ချို့ရယ် လွတ်လွတ် လပ်လပ်ပေါ့ဗျာ။
အလုပ်ထဲစိတ်နှစ်ထားသမျှ အခုမှစိတ်ထဲ နည်းနည်းပေါ့သွား တော့တယ်။ပြီးတော့ အလုပ်ဆက်လုပ်ကြပေါ့။ ညနေအရောက် အလုပ် ဆင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါ ကျော်ကျော်က သူအလုပ်လုပ် တဲ့ဘားအကြောင်း မင်းအတွက်အလုပ်တစ်နေရာစာပြောခဲ့ ကြောင်း ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အလုပ်အကိုင် အကြောင်း ကောလိပ်အတွက် ငွေစုဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်စကား တွေဆိုရင်း နှစ်ဦးသား အလုပ်ဆင်း ဖို့ပြင်ဆင်ပြီး ထွက်လာကြ တယ် စက်ရုံထဲကနေ။
အဲဒီအချိန် စက်ရုံတံခါးနားမှာ ကားခပ်သန့်သန့်တစ်စီးထိုး စိုက်လာတယ်...ပြီးတော့ ကားထဲမှလူရွယ်တစ်ဦးဆင်းအလာ စက်ရုံမှူးတွေ ဘာတွေက ပျာပျာသလဲကြိုကြပြုကြနဲ့။ ဘယ်သူ မှန်းတော့မသိဘူး.....။ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတော့ သူကျွန်တော့်ကိုစူးစိုက် ကြည့်နေရင်း စကားပြောဖို့ကြိုးစား တာလားမသိ ကျွန်တော်ရှိရာလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လုပ်ရင်း ကျွန်တော်ရှိရာလှမ်းလာတယ်။ သူ့ကိုဂရုမစိုက်ဘဲ ဆက် လျှောက်အလာ ကျော်ကျော်က "ဆွေမင်း....အဲဒီလူက CEO ရဲ့သားလေ။ မင်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ရာထူးရချင်ရင် အတည် ၀န်ထမ်းဖြစ်ချင်ရင် သူကထောက်ခံပေးနိုင်တယ်ကွ။ သူနဲ့သွား စကားပြောပြီး မင်းရဲ့အကြောင်းပြောပြကြည့်ပါလား အကူအညီ ရ လိုရငြားပေါ့ကွာ။"
စိတ်ထဲထောင်းကနဲ ဒေါသထွက်သွားမိတယ်။ ကျော်ကျော်က ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ပြောတာမှန်ပေမဲ့ ကျွန်တော်အဲဒီလောက် နိမ့်ပါးနေသူ မှမဟုတ်တာ၊ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့ ကိုယ်ရပ်တည်ဖို့ ကြိုးစားနေသူပဲဗျ။အလုပ်တစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်ထောက်ခံ ပေးမှ တည်မြဲမှာလား၊အဲဒီလူ ကြည်ဖြူမှ ရာထူးတိုးမတဲ့လား ..သွားစမ်းပါ။
လှေခါးလေးကနေတစ်ဆင့် ခပ်မိုက်မိုက်ရုံးခန်းတစ်ခန်းထဲကို ၀င်လာဖြစ်တယ်နောက်တနေ့မှာ။ စားပွဲခုံတစ်ခုမှာ ထိုင်ရင်း အလုပ်လုပ် နေတဲ့ သူဟာ ကျွန်တော်ဝင်လာတာကိုမြင်တော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေမှာ အပျော်ရိပ်တွေထင်းလာတယ်။ "မင်းနဲ့ပြန် တွေ့ရတာဝမ်းသာ တယ်ကွာ၊ မင်းဒီစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်နေတာလား။ ငါဘာကူညီပေးနိုင်မလည်းမင်းအတွက်။ ဟောဒီမှာ ငါ့ရဲ့ လိပ်စာကဒ်။" ကျွန်တော် လာရင်းကိစ္စကို မပြောဖြစ်သေးဘူးသူ့ စကားတွေကိုနားထောင်ရင်း စိတ်ထဲဘာကိုမှန်းမသိ မကျေနပ် ဖြစ်နေတာ။ သူ့လိပ်စာကဒ်ကို လှမ်းပေးတော့... ဘာမှဆက် မပြောတော့ဘဲ သူ့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။
သွားစမ်းကွာ...လက်အိပ်တွေ ၀န်ထမ်းဝတ်စုံတွေချွတ်ပြီး စက်ရုံ ထဲကထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။ ငါ့ကိုဘာထင်နေ သလည်း မသိပေါ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားခဲ့ရတာက။ ဟား.......... သက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှူရင်းတောင်ကုန်းလေးပေါ်ရှိအိပ်ခန်းကျဉ်းလေးကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲကရှိတာလေးတွေ ထုတ်ပြုပြီးချက်ပြုတ်၊ပြီးတော့ထမင်းစားရင်း...ကျော်ကျော်ပြောတဲ့ဘားခန်းကို လှမ်းဖုန်းဆက်လိုက် တယ်။ လာခဲ့ပါတဲ့လေ.....။ ရေမိုးချိုးသန့်ပြန့်အောင်ပြင်ပြီး စစ်မြေပြင်တစ်ခုကိုထွက်ခွာလာ ရသလို လှမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကြားလမ်းတွေရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုရဲ့ ခပ်မှောင်မှောင် လမ်းသွယ်လေးကတစ်ဆင့်ဝင်လာခဲ့တာ ဟောတွေ့ပါပြီ နီယွန် မီးတွေ လင်းနေတဲ့ ကားတွေစီရီနေတဲ့ ကလပ်ဘားတစ်ခု။ ရင်ခုန်ဖွယ် ဂီတသံတွေထုံမွှမ်းထားတဲ့ ကပွဲကြမ်းပြင် စား သောက်နေသူတွေ အစီအရီ ကာရာအိုကေအခန်းများက အဆို ၀ါသနာရှင်တို့အတွက် ကလပ်ရဲ့ နောက်ပိုင်းအခန်းတွေမှာတော့...။
၀န်ထမ်းအုပ်ချုပ်တဲ့မန်နေဂျာဆီရောက်တော့ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးသူစိုက်ကြည့်ရင်း ကြောင်ပြုံးပြုံးပါရဲ့။ ...ဘာ ကြောင့်လည်း။
စာကြွင်း။ ။ ဒီဝတ္ထုလေးဟာ ကျွန်တော်လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေတုန်းက ရေးပြီးတင်ခဲ့တဲ့ အခန်းဆက်ဝတ္ထုလေးပါပဲ။ အဓိက ဇာတ်လမ်းကတော့ ကိုရီးယားကားလေးတစ်ကား( No Regret) ကိုကြည့်ရင်း ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်တည်လာတာကြောင့် ကျောရိုးယူရေးဖြစ်ခဲ့ခြင်းပါ။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းဖတ်ဖူးခဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုပြန်တင်ဖြစ်ရခြင်းက ကျွန်တော် စာရေးဖို့အချိန်မရတာများနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့လည်းမပျင်းရအောင် ပြန်လည်ဖတ်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ ပြည်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်လို့နော်။
Posted by Alex Aung at 12:37 PM No comments: